Home Wararka Maxay isku afgarteen kulankii odayaasha beesha Habargidir iyo MW. Farmaajo (Akhriso qodobada)
Maxay isku afgarteen kulankii odayaasha beesha Habargidir iyo MW. Farmaajo (Akhriso qodobada)
Shir ay iskugu yimaadeen odayaal ka socday beesha Habar Gidir iyo MW. Farmaajo aya ka dhacay hoyga Madaxweynaha ee Villa Somalia.
Kunlanka oo ah mid aad u kulul aya waxaa la isku weydaarsaday hadalo ad-adag, iyadoo odayaasha beesha Habargidir ay Madaxweynaha u sheegeen in laba mid ay ugu yimaadeen. Odayaasha ayaa sheegay in aay dhowrayaan dowladnimada, isla markaana aanay marnbaba raalli ka noqoneyn dowladda hadda girt taasoo bey sheegeen in dhib badan laga soo maray sidi loo heli lahaa dowlad taaba qaadda horumarka dalka iyo dib u dhiska qaranimada burburtay.
Odayaasha ayaa madaxweynaha soo hordhigay afar (4) qodob oo ay wateen, ugana fadhiyaan in MW. Farmaajo uu ku tixgeliyo codsigooda uuna ka miro dhaliyo. Mid ka mid ah odayaasha ayaa yiri “Habeenkii lagu doortay waad xusuusatay sida magaalada Muqdisho ico magaalooyin kaleba looga dabbaal degay, taasi waxay ahayd quluubta shacabka oo rajo badan kaa qabay, balse waxaan aragnaa ififaalo rajo beel ka dhigaayo shacabka” Ayuu yiri.
Hadalllo kulkul oo la is dhaafsaday kaddib waxay odayaasha MW. Farmaajo hor dhigeen qodobadan soo socda
In aanay raalli ka noqoneyn dad cuqdeysan oo aad awood siisay, ujeedkooduna uu yahay aargaasi qabiil, waxaan u tureynaa dowladnimada iyo kaladanbeynta, haddii la waayana magaalada la isla joogi maayo.
In ay uga fadhiyaan in uu iclaamiyo xilliga aay bilaabaneyso dhismaha dekedda Hobyo
In uu farahah kala baxo burburinta maamulka GalMudug iyo
In uu ka dhabeeyo ballanqaadkii ahaa in aanay dowlad raalli ka noqoneyn dhismaha dekedda Garacad.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ogolaaday afarta qodob, wuxuuna odayaasha u sheegay “In aanu doorasho galeyn inta ay ka bilaabaneyso dhismaha dekedda Hobyo” Waxaa kale oo uu hadalkiisa ku daray “In ay odayaasha kala dhex galaan isaga iyo Madaxweyne Xaaf si wadajir ahna looga shaqeeyo sidii leysugu soo dhaweyn lahaa isaga & Xaaf.
Waxaa uu ugu danbeyntii sheegay in uu dhib ku hayaan beelaha qaar oo aanan rabin in la dhiso dekedda Hobyo, balse waxaan idinka ballan qaadayaa maanta in ay iga go’antahay dhismaha dekedda Hobyo. Dhismaha dekedda Hobyo waxaan ka wada hadalnay dowladda Itoobiya, oo waa marinka ugu dhow ee alaab loogu geyn karo Soomaalida deggen Kelinka Shanaad ayuu yiri MW. Farmaajo.
Mamulka Puntland aya isku dayay in uu hor istaago dhismaha dekedda Hobyo walow aanay u suurto galeyn in ay helaan ruqsad dowladda dhexe ah si loo dhiso dekedda Garacad.
Previous articleDowlada Soomaaliya oo soo saartay digniin culus
Next articleGudoomiyaha Gobolka hiiraan iyo masuuliyiin la socotay oo la weeraray!
Yaa ka danbeeyay dilkii Gudoomiye K/Xigeenka Degmada Matabaan?